निर्मला पन्त हत्यापछि उब्जिएका प्रश्नहरु - Samadhan News
समाधान संवाददाता २०७६ साउन १० गते १३:१४
‘निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या’ शीर्षकमा विकिपिडियाले लेख्छ– ‘नेपालमा भएको १ दर्दनाक हत्याकाण्ड मध्ये १ हो । यसमा कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिकाकी १३ वर्षिया किशोरी÷बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भएको थियो । विसं २०७५ साउन १० गते कञ्चनपुर जिल्लाको महेन्द्रनगरमा साथीको घरबाट हराएकी किशोरी पन्तको मृत शरीर भोलिपल्ट स्थानीय उखुबारीमा फेला परेको थियो ।’ विकिपिडियामा उल्लेखित थोरै मध्येको १ महत्वपूर्ण घटना हो, नेपालका लागि यो । नेपालको इतिहासमै रहस्यमय मध्येको प्रतिनिधि घटना निर्मला हत्या प्रकरण हो । नेपाली र अंग्रेजी दुवै संस्करणमा यो हत्याकाण्ड उल्लेख गरेको छ, विकिपिडियाले । निर्मला पन्तको हत्या भएको आज ठ्याक्कै १ वर्ष पूरा भयो । हत्याको ३ सय ६५ दिनमा हजारौं मान्छे सडक झरे सरकारले ६५ मिनेट पनि छानविनमा खर्च गर्न सकेन । उनको हत्यारा अहिलेसम्म पनि फरार छन् ।
उनको हत्या आरोपमा प्रहरीले पटकपटक धेरै व्यक्ति पक्राउ गर्‍यो । तर कोही पनि वास्तविक ठहरिएनन् । स्थानीय भन्छन्, उनको हत्यामा प्रहरी संलग्न छ । प्रहरीले १ पटक मानसिक अवस्था ठीक नभएको व्यक्तिलाई पक्राउ गरी सार्वजनिकसमेत गर्‍यो । छिमेकी र अरु स्थानीय ती व्यक्तिलाई हत्यारा मान्न तयार भएनन् । त्यसपछि फेरि चोरी–डकैतीमा पटकपटक जेलमा बसेका व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर घटना स्वीकार गर्न बाध्य पारियो । पछि हत्या भएको दिन पनि ती व्यक्ति जेलमै रहेको पुष्टी भएपछि प्रहरीको लापरबाही बाहिरियो ।
मेरो देशको प्रहरी प्रशासनको यो भन्दा ठूलो बेइजतीको क्षण के हुन सक्छ ? यस्ता प्रहरी संगठनबाट जनताले कस्तो न्याय पाउँछन् ? स्थानीयको बलियो दावी छ, प्रहरी संगठनभित्रकै मान्छे निर्मलाको हत्यारा हुन् । त्यसैले गर्दा, वास्तविक हत्यारा सार्वजनिक नगरिएको हो । यद्यपी हालसम्म उनको हत्या आरोपमा कसैले पनि किटानी जाहेरी दिएका छैनन् । सत्य छानविनको माग गर्दै सर्वसाधारण सडकमा निस्किँदा १ युवकको गोली लागि मुत्यु भयो । त्यसपछि सरकारले भदौमा विशेष छानविन समिति गठन गर्‍यो । छानविन समितिले घटनामा प्रहरीको लापरबाही रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन । वर्षदिन पुगिसक्दा सरकार सधैं निर्मलाका हत्यारा पक्राउ गरिछाड्ने दाबी गर्छ, तर गम्भीर भएर अहिलेसम्म छानविन गरेको छैन ।